Maxkabadu waxay dib u dhigaysaa guryo ka saarista qoysaska “Sheekh Jarrax” - WalWaal Online News and Information about Somalia
Home Wararka Maxkabadu waxay dib u dhigaysaa guryo ka saarista qoysaska “Sheekh Jarrax”
Warbaahinta Israa’iil ayaa werisay Isniintii in Maxkamadda sare ee Israa’iil ee ku taal Qudus ay dib u dhigtay eryida dadka Falastiiniyiinta ah ee deggan guryahooda oo ku yaalla xaafadda Sheekh Jarrax “sababo la xirdhidha cabsi laga qabo inay sii xumaato xaaladda amni ee ka dhexaysa israil & Hamas,”
Intii dhegaysigu socday, garsoorayaashu waxay soo jeediyeen heshiis dhigaya in dadka deggan xaafaddu ay ku sii joogaan “kiraystayaal la ilaaliyo”, taas oo ay hore u diideen dadka deggan xaafadu, dadku waxay dalbadeen in loo aqoonsado inay yihiin milkiileyaal. waxaa se diiday Garyaqaan Sami Carshid.
Horaantii maanta, tobanaan dad ah ayaa isugu soo baxay bannaanka Maxkamadda Sare iyagoo taageero u muujinaya qoysaska Falastiiniyiinta oo loogu hanjabay in laga saari doono guryahooda ku yaalla xaafadda Sheekh Jarrah ee Qudusta la haysto.
taageerayaashu waxay wateen boodhadh ku qoran Carabi, Ingiriisi iyo Cibraani, oo ay ku qoran-yihiin “Caddaalad ha hesho Sheekh Jarrah”, “ Ha Dhamaado nidaamka midab kala sooca Israa’iil” iyo “Waannu sii joogi oo kama bixi doonno dhulkayaga”.
Asala al-Qaasim, oo ka yimid xaafadda Sheekh Jarrax, ayaa ka sheegay gudaha fagaaraha maxkamadda in “ay aad u badan tahay in maxkamadda dib loo dhigo.”
Fadhigan ayaa ku soo beegmay iyada oo maxkamaddu ay dhegeysatay codsiyo ay soo jeediyeen afar qoys oo ka dhan ah go’aamadii looga saaray guryahooda.
Warbaahinta maxalliga ah ayaa soo warisay in ciidamada gumeysiga Israa’iil iyo dadka xooga lagu dejiyey xaafadda Sheekh Jarrah ee Qudus heegan la geliyey, ka dib markii qof dadka la deggaameeyey ah uu toogtay wiil Falastiini reer Qudus ah.
Previous articleIsraa’iil awood ay ugu hanjabto Iran malaha.
Next articleCudur aan la aqoonsan ayaa tarab-tarab u laynaya bisaddaha UK dhakhaatiirtuna weli way la halgamayaan.